Codashop Global Series - League of Legends: Wild Rift
Codashop Global Series “Play & Donate” Charity Tournament 2021 စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ
၁. ဒီပြိုင်ပွဲဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက်သာသီးသန့်ဖြစ်ပါသည်။
၂. ပြိုင်ပွဲဝင်ကြေး – အခမဲ့
၃. Final ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့်ရက် – ၃.၁၀.၂၀၂၁
၄. ပြိုင်ပွဲဝင်မည့် အသင်းအားလုံးသည် ပွဲတစ်ခုချင်းစီးမှာ ၃ ခါထပ်ပိုပြီးတော့ Pause လုပ်ခြင်းမပြုရပါ။ Pause လုပ်သည့်အချိန်မှာလည်း ၂ မိနစ်ထက်ပို၍ ကျော်လွန်၍မရပါ။
၅. ပြိုင်ပွဲဝင် အသင်းအဖွဲ့ ပုံစံများ
Qualifier Stage – Best of 1
Semi-Final – Best of 1
Final – Best of 3
Maximum Slots – 64
၆. ပြိုင်ပွဲသို့ပါဝင်သူတွေအနေနဲ့ ပွဲမစခင် (၁)နာရီအလိုမှာကြိုပြီးတော့ check in ဝင်ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲအတွင်းသို့ ၁၀မိနစ်နောက်ကျပြီးမှဝင်ရောက်လို့မရပါဘူး။
၇. Codashop Global Series ကိုပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူတွေအနေနဲ့ မိမိကိုယ်ပိုင် စမတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့သာ ယှဉ်ပြိုင်ရပါမယ်။ Tablet အသုံးပြုပြီး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လို့မရပါဘူး။
၈.Third Party အသုံးပြုထားတဲ့ software များဟာ ဂိမ်းတွင်းအခြေအနေကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်စေတတ်တာကြောင့် (ဥပမာ: ဂိမ်းမျက်နှာပြင်၊ အမြန်နှုန်း) SFX၊ Crosshair စတာတွေကို အသုံးပြုချင်းကိုတားမြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲတွင်းဝင်ပြိုင်သူ ကစားသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီအချက်များထဲမှ တစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ပွဲစည်းကမ်းနဲ့ မညီညွတ်ဘူးလို့ သတ်မှတ်ပြီးအနိုင်ရရှိခဲ့ပါကလည်း ဆုပေးအပ်ခြင်း မပြုသည့်အပြင် ပွဲအတွင်းမှ Ban မှာဖြစ်ပါတယ်။
၉. ပွဲအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့်ကစားသမားတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းသည် ၎င်းတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ကိုသာအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၀. အကယ်၍ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူသည် system error တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်ပါက ပြိုင်ပွဲကျင်းပသည့် Admin ဒါမှမဟုတ် Channel moderator ကို (၃) မိနစ်အတွင်းအမြန်အကြောင်းကြားပေးရပါမယ်။
၁၁. အသင်းနာမည်နဲ့ ကစားသမားနာမည်ဟာ ညစ်ညမ်းသော အသုံးအနှုန်းများနှင့်ပေးထားတာ မဖြစ်ရပါဘူး။
၁၂. ဂိမ်းတစ်ပွဲဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြန်လည်ကစားရမည်ဆိုလျင် (ပြန်လည်ကစားရမည့်အကြောင်းအရင်းမှာ)
ကစားသမားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အင်တာနက်ပြတ်တောက်သွား၍ ပွဲအတွင်းမှ ထွက်သွားရခြင်း (သို့မဟုတ်)
ကစားသမား အနေဖြင့် slot မှားယွင်းပြီးဝင်မိခြင်း
ဂိမ်း setting မှားယွင်းနေခြင်း စတဲ့ အချက်တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
၁၃. Bug တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ နိုင်ပွဲ ဒါမှမဟုတ် တစ်ဖက်အသင်းသားအပေါ် တစ်ခုခုအသာရခြင်းဟာ ပွဲစည်းကမ်းနဲ့ မကိုက်ညီပါဘူး။
၁၄. ပြိုင်ပွဲကို Register လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ ဓာတ်ပုံ ၊ ဗီဒီယို နဲ့ တစ်ခြားသောပွဲအတွင်းမှာ record လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကို “Codashop” ရဲ့ မီဒီယာတွေမှာ ကူးယူဖော်ပြခွင့်ရှိပြီး ဈေးကွက်စီးပွားရေး အရလည်းအသုံးပြုခွင့်ရှိပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲအတွင်းတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပွားပါက ပြိုင်ပွဲစီစဉ် ကျင်းပသူရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်သာအတည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက် အကျုံးဝင်သောအကြောင်းအရာများမှာ ( ပြိုင်ပွဲကျင်းပသည့် စနစ် ၊ ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းများ ၊ အနိုင်ရရှိသူရွေးချယ်သည့်စနစ်များ)
(က) အနိုင်ရရှိသူကိုအောက်ပါအတိုင်းရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက် ငါးယောက်စီယှဉ်ပြိုင်ကစားရတဲ့ League of Legends : Wild Rift မှာ အနိုင်ရရှိသူကိုအောက်ပါစည်းကမ်းချက်တွေအတိုင်းရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရန်သူရဲ့ တာဝါကို အပြီးသတ်ဖျက်ဆီးနိုင်ခြင်း။
ဖော်ပြထားတဲ့ စည်းကမ်းချက်များဟာ ပြိုင်ပွဲဝင်များအားလုံးအတွက် ဖြစ်ပြီး အငြင်းပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်ပါက ပြိုင်ပွဲစီစဥ်သူ “Codashop” ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သာ အတည်ပြုသတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
( ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း )
ပြိုင်ပွဲများတွင်ကျင့်သုံးသောထုံးစံအရ နောက်ဆုံး ဖိုင်နယ်ပွဲတွင် ၃ ပွဲတိတိယှဉ်ပြိုင်ကစားရမည်ဖြစ်သည်။ ၃ ပွဲလုံးတွင် အသင်းတစ်သင်းတည်းက ၂ ကြိမ်တိတိအနိုင်ရပါက ထိုအသင်းကို ပြိုင်ပွဲတွင်အနိုင်ရရှိသူအဖြစ်သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။
(က) အသင်းနှစ်သင်း ၃ ကြိမ်ယှဉ်ပြိုင်ကစားခြင်းကို BO3 ဟုခေါ်ဆိုသည်
(ခ) ရိုးရိုးရှုံးထွက်ကစားခြင်းသည် ပုံမှန်အတိုင်းပဲ တစ်ကြိမ်သာကစားရမည်ဖြစ်သည်။
Final မဟုတ်တဲ့ ပွဲစဉ်များအားလုံးကို Best of 1 ပုံစံဖြင့်သာ သတ်မှတ်ပြီးယှဉ်ပြိုင်ကစား ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Final ကိုရောက်မှသာ Best of3ပုံစံဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကစားပွဲ အစီအစဉ် နှင့်
Codashop အနေနဲ့ ပွဲစဉ်အပြောင်းအလဲများကို မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မဆို အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲခွင့်ရှိသည်။ ထိုသို့ ပွဲစဉ်ပြောင်းလဲသည့်အခါ Codashop မှ ဝင်ပြိုင်မည့်အသင်း အားလုံးကို အကြောင်းကြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Early Check in ( ပြိုင်ပွဲသွင်းသို့ စောစီးစွာဝင်ရောက်ခြင်း)
ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့်အသင်းများအနေဖြင့် game lobby သို့အနည်းဆုံး မိနစ် ၆၀ ခန့်စောပြီးဝင်ရောက်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် အသင်းများအနေနဲ့ မိမိအသုံးပြုသည့် Game Version ကို Codashop ကသတ်မှတ်ထားသည့် Game Version ကိုသာ အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ League of Legends : Wild Rift ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ထားသည့် ဂိမ်း Version ကိုသာ ပွဲအတွင်းမှာအသုံးပြုပေးရမည်ဖြစ်သည်။
ကစားသမားတွေဟာ ယှဉ်ပြိုင်မှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်အနည်းငယ်လိုအပ်ပါတယ်။ ကစားသမားတစ်ယောက် Lobby ထဲဝင်ရောက်သွားတဲ့အခါ ပြန်လည်ထွက်ခွာချင်တ ယ်ဆိုရင်တော့ပွဲစီစဉ်သူ Codashop ရဲ့ Admin ကိုအသိပေးအကြောင်းကြား ပြီးတော့မှသာထွက်ခွာခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကစားပွဲမစခင်ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်တဲ့အခါ ပြီးထားသင့်တဲ့အရာတွေကတော့-
လိုအပ်သော ဂိမ်း Setting များကိုပြောင်းလဲထားခြင်းနဲ့
Codashop ရဲ့ စည်းမျဉ်း ၊ စည်းကမ်းများကို လေ့လာထားခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကစားသမားတွေဟာ မည်သည့်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမဆိုဖြစ်ပါ်ပါက ပွဲမစခင်အချိန်တွင်းမှာကြိုပြီးဖြေရှင်းထားဖို့လိုပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲကို စီစဉ်ထားတဲ့ အချိန်ဇယားအတိုင်းစတင်မှာဖြစ်ပြီး Codashop Admin ဘက်မှအကြောင်း တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ပွဲချိန်နောက်ကျခြင်း ၊ ပြောင်းလဲ ခြင်းမှလွဲ၍ မည်သည့်ကစားသမားမှ ပွဲချိန်နောက်ကျခြင်းကို ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ အသင်းတစ်သင်းမှ ကစားသမားတစ်ယောက်ယောက်၏ အမှားကြောင့်နောက်ကျခြင်း ၊ကြန့်ကြာခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာပါက Codashop အနေဖြင့်၎င်း ကစားသမားပါဝင်သော အသင်းကိုထိရောက်သော အပြစ်ပေးခြင်းများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Previous articleMLBB ရဲ့ (၅)နှစ်ပြည့် Anniversary မှာ အမှတ်တရတွေဖလှယ်ရင်း Starlight Membership ကံစမ်းကြမယ်! 5️⃣🎉
Next articleMobile Legends မှာ အရှားပါးဆုံး Skin6ခု
International Women’s Day မှာ ဂိမ်းဆော့တဲ့ကေ...
ZEPETO မှာ ဘာဘယ်တီးဒိတ်ကြမယ်!